Puntland oo amar Culus soo saartay (Aqriso) - Muqdisho Online
Taliska booliiska Puntland ayaa digniin culus u jeediyay dadka wax tahriibiya ee ku sugan magaalada Boosaaso ee gobalka Bari waxaana sheegay in ay talaabo ka qaadayaan dadka sida dhuumaalaysiga tahriibinta u wada isla markana laga qaadayo talaabo sharci ah kadib markii ay kor dhiyeen howlgalada lagula dagaalamayo kooxahaan.
Taliyaha Ciidabka booliiska Puntlan Gen: Muxuudiin Axmed Muuse oo la hadlay Suxufiyiinta ayaa sheegay in kooxahaan ay bedeleen goobihii markii hore ay dadka ka tahriibi jireen laakiin uu sheegay in ay la socdaan meelaha kale ee ay u wareejiyeen cid kasta oo falkaas lagu helana sharciga ay la tiigsanayaan.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Boosaaso ee gobalka Bari howlgalo adag oo ay wadeen ciidanka booliiska Puntland oo lagu baadi goobayay dadka dilalka ka geysta gudaha iyada oo uu barbar socday howlgal kale oo lagula dagaalamayay dadka wax tahriibiya eek u sugan deeganada maamulkaas.
Previous articleMadaxweyne Xaaf oo sheegay in ay Qabanayaan Howl ay ku fashilantay Dowlada dhexe!!
Next articleGabar 11-jir ah oo lagu Kufsaday Degmada Kaaraan